အစ်ကိုဖြစ်သူ သရုပ်ဆောင် ကျော်ရှိန်းအတွက် မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့တဲ့ ပပဝင်းခင် - Yaung Chi
Homepage / Cele News / အစ်ကိုဖြစ်သူ သရုပ်ဆောင် ကျော်ရှိန်းအတွက် မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့တဲ့ ပပဝင်းခင်
By Ma RiaPosted on January 31, 2021 January 31, 2021
ပရိသတ်ကြီးရေ တစ်ခေတ်တစ်ခါက ပရိသတ်တွေအသည်းစွဲကြိုက်ခဲ့ရတဲ့ မော်ဒယ်လ်သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောလေး ပပဝင်းခင်ကိုတော့ အားလုံးသိကြမယ်ထင်ပါတယ်နော် ။ ပပဝင်းခင်ရဲ့ အစ်ကိုအရင်းဖြစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင် ကျော်ရှိန်းကတော့ အနုပညာလောကထဲက ပျောက်ကွယ်နေခဲ့တာ အချိန်အတော်ကြာပြီဆိုပေမယ့် ချစ်ခင်အားပေးတဲ့ ပရိသတ်တွေလည်း ရှိနေဆဲပါ ။
ဒီနေ့ကတော့ သရုပ်ဆောင် ကျော်ရှိန်းရဲ့ မွေးနေ့ရက်မြတ်လေးဖြစ်ပြီး ပပဝင်းခင်ကHappy Birthday Ko Gyi ! Happy Birthday returns of the day.Best wishes for many more ! ချစ်ကိုကြီး၏မွေးနေ့မှစ ချစ်သောမိသားစုနှင့်အတူ အသက်ရာကျော် ကျန်းမာခြင်း ချမ်းသာခြင်း ပျော်ရွင်ခြင်း အောင်မြင်ခြင်း ပြည်စုံခြင်း ဘေးရန်အပေါင်းကင်းဝေးပြီး လိုတိုင်းရ တတိုင်းပြည့်စုံသော ဘဝကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ရပါစေ… သာသနာအကျိုးကို ဆထက်တိုးပြီးဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေလို့ ချစ်သောမိသားစုမှ ဆုတောင်းပေးပါတယ် ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့အတူ အစ်ကိုဖြစ်သူအတွက် မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းလေးတောင်းပေးခဲ့ပါတယ် ။
လူပျိုကြီး ကိုကြီးကျော်ရှိန်း အသည်းကျော်တွေအတွက် ပုံတွေ အများကြီးတင်ပေးလိုက်တယ် ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့အတူ သူမတို့မောင်နှမ နှစ်ယောက်ရဲ့ ပုံလေးတွေကိုလည်း ပရိသတ်တွေကို လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေတဆင့် မျှဝေပေးခဲ့ပါတယ် ။ Happy Bithday ပါ သရုပ်ဆောင် ကျော်ရှိန်းတစ်ယောက် မွေးနေ့ကစပြီး နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာထိ ချစ်တဲ့မိသားစုနဲ့အတူ ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်သွားနိုင်ပါစေလို့ Yaung Chi မှ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော် ။
Source : Papa Win Khin
လှတောသားရဲ့ဘဝ ဝင်္ကပါ ဇာတ်လမ်းတွဲအား အောင်မြင်စွာရိုက်ကူးပြီးစီးခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ နေထူးနိုင်
Posted in Cele NewsTagged cele, celebrity, celebrity news, Kyaw Shein, Papa Win Khin
Previous post (၁၉၉၉) ခုနှစ်ကလှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ဆွမ်းစားကျောင်းဆောင်ကို ပြန်လည်ပြုပြင်လှူဒါန်းဖို့ ပြင်ဆင်နေတဲ့ ထက်ထက်မိုးဦး
Next post အားလုံးနဲ့အတူ တိုက်ပွဲဝင်စဉ်အချိန်က စေတနာအပြည့်နဲ့ဝေငှခဲ့တဲ့ မုန့်တွေ အအေးတွေကို လွမ်းကြောင်းပြောပြလာတဲ့ မြနှင်းရည်လွင်